कठैबर ! बृद्धाश्रममा सन्तान आउने दिन कुर्दाकुर्दै अस्ताइन ६८ वर्षीया चेतकुमारी बुढाथोकी – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /News/कठैबर ! बृद्धाश्रममा सन्तान आउने दिन कुर्दाकुर्दै अस्ताइन ६८ वर्षीया चेतकुमारी बुढाथोकी
साउने झरीको एक साँझ। बृद्धाश्रमको परिसर। अपराहन्न करिब पाँच बजे उनले जीवनको अन्तिम सास फेरिन्। र, सधैका लागि अस्ताइन्। बुढेसकालमा जीवनको ओत खोज्दै तेरौंटेस्थित बृद्धाश्रममा आइपुगेकी ६९ वर्षीया चेतकुमारी बुढाथोकी असार १२ गते बृद्धाश्रममै बितिन्। उनी नौ महिनाअघि वृद्धाश्रममा पुगेकी थिइन्। आफ्ना चार सन्तान, आफन्त र माइतीले साथ छाडेपछि उनी एक्लो बनेकी थिइन्। र, जीवनको अन्तिम सहारा खोज्दै उनी बृद्धाश्रमको बाटो तताएकी थिइन्।
दाङ फर्किएपछि केही समय उनले होटल चलाइन्। त्यसपछि बिरामी परिन्। पेटमा पानी भरिएको रहेछ। अप्रेसन गरिन्। साथमा केही थिएन। ‘न पैसा थियो, न आफन्ती’– उनले भनेकी थिइन्– ‘होटल बेचेर औषधि गरें।’ अस्पतालमा उनी १२, १५ दिन बिरामी भएर थलिइन्। तर भेट्न कोही आएनन्।उनका सन्तान थिए, आफन्त र माइती पनि थिए। र, पनि कसैले उनलाई सम्झिएनन्। भेट्नसम्म आएनन्। अन्ततः उनी बुढ्यौली उमेर र रोगले थलिएपछि कमजोर शरीर बोकेर गत वर्ष बृद्धाश्रम पुगेकी थिइन्।
आफैले जन्माएर हुर्काइ बढाई गरेको सन्तानले नसम्झे पनि उनलाई भने सन्तानको सम्झनाले सुब सताउँथ्यो। जीवनको अन्तिम क्षणमा उनलाई अरु केही चाहना थिएन। मात्र सन्तानको साथ चाहन्थिन्। उनलाई लागेको थियो– आफैले जन्माए, हुर्काएका सन्तानले एकदिन त कसो पो न सम्झिएलान्।छ महिनाअघि उनीसँग गरेको संवादमा उनले भनेकी थिइन्– ‘दुःखसुख जे छ, सन्तानको साथमा बिताउने मन छ। उनीहरुको साथ पाए सबै पुग्ने थियो। मलाई लिन आए त अहिले नै यहाँ (बृद्धाआश्रम) बाट जाने थिएँ।’ जीवनको अन्तिमसम्म पनि उनले बृद्धाश्रममा सन्तानको प्रतीक्षा गरिरहिन्। सन्तानको बाटो कुरिरहिन्। र, अन्ततः उनी सन्तानको पर्खाइमै बितिन्।